Nafaqada & Jimicsiga ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Nafaqada & Jimicsiga ee Columbus, OH
Ilmuhu si dhakhso leh ayey u koraan oo ay u kobcaan sagaal bilood oo ay caloosha ku jireen. Cuntadaadu waa isha laga helo nafaqooyinka iyo tamarta taageerta horumarkan degdegga ah. Daraasaduhu waxay si weyn u muujinayaan sida ugu dhow caafimaadka ilmaha ee dhalashada uu ugu xidhan yahay cuntada hooyada inta ay uurka leedahay.
Caadooyinka nafaqada ee wanaagsan ayaa lagama maarmaan ah muddada uurka. Maalin kasta, waxaad u baahan tahay inaad wax cuntid:
Afar jeer oo borotiin ah.
Laba jeer oo ah fiitamiin C-ga.
Afarta jeer ee cuntada kaalshiyamka leh.
Saddex jeer oo khudaar cagaaran iyo cagaar iyo miro huruud ah.
Laba jeer oo ah miraha iyo khudradda kale.
Shan jeer oo ah hadhuudh dhan iyo digir.
Cuntooyinka hodanka ku ah birta.
Ugu yaraan 64 wiqiyadood oo cabitaanno ah. (Kuma jiraan dareereyaasha kafeega ku saleysan. Caanaha waxaa lagu tiriyaa kaliya 2/3 biyo.)
Waxaa laga yaabaa inaad fikrado qaldan ka haysato qaadashada milixda inta aad uurka leedahay. Kaliya milixda cuntadaada si aad u dhadhamiso, iskana ilaali xaddidaadda milixda haddii aan si kale loo barin.
Ugu dambeyn, fadlan ha cabin aalkolo. Cudurka khamriga uurjiifka waa natiijooyinka tooska ah ee cabitaanka khamriga inta lagu jiro uurka waana sababta ugu horraysa ee looga hortagi karo naafonimada caqliga. Dhibaatooyinka kale ee xun waxaa ka mid ah cilladaha wajiga, dhererka oo yaraaday, kacsanaanta, dhibaatooyinka xagga barashada, feejignaanta, xusuusta, iyo xallinta dhibaatooyinka, isku-duwidda liidata, dareen-la'aanta, iyo hadalka iyo maqalka oo naafooba kuna sii jiraya qaan-gaarnimada iyo qaan-gaarnimada.
Ma garanayno inuu jiro marin ka hooseeya aalkolo la cabi karo iyadoo aan waxyeello uurjiifka lahayn. Tan darteed, waxaan kugula talineynaa in haweenka uurka leh iyo kuwa naas nuujinaya ay ka fogaadaan isticmaalka aalkolada, inta laga xaqiijinayo doorka khamriga ee horumarka uurjiifka.
Culeyska Caadiga ah
Kordhinta miisaanka la jecel yahay waxay ku saleysan tahay uurkaaga ka hor BMI (Body Mass Index). Inta lagu jiro saddexda bilood ee ugu horreysa uurka, kororka shan rodol waa celcelis. Inta u hartay uurka, celceliska faa'iidada waa qiyaastii ¾ ilaa hal rodol usbuucii. Fadlan tixraac shaxda hoose ee BMI iyo kororka miisaanka.
BMI Lagu taliyay wt. kasbasho
> 29 15lb
Miisaan dhaca inta aad uurka leedahay waa mid aan loo baahnayn maxaa yeelay waxay ka dhalan kartaa waxyeelo ilmahaaga. Way ka wanaagsan tahay inaad kordhiso miisaankaaga intii aad u heli lahayd miisaan aad u yar.
Listeria waa bakteeriya waxyeello leh oo ku kori karta heerkulka qaboojiyaha halkaasoo inta badan bakteeriyada cuntadu ka soo baxdo aysan ku dhicin. Waxay keentaa jirro loo yaqaan Listeriosis. Waa haddii laga helo qaboojiye, cuntooyin diyaar u ah inay cunaan iyo caano aan caano lahayn iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Raacitaanka talaabooyinka fudud ee waxka qabashada cunugga waa inay adiga iyo cunuggaagaba ku ilaaliyaan caafimaad qab inta aad uurka leedihiin.
Cunnooyinka kordhin kara halista cudurka listeria waxaa ka mid ah:
Hilib kulul oo aan kululayn iyo hilib qado
Farmashiyaha jilicsan ee aan la saarin: Feta, Brie, Camembert, Cheese Blue, Panela
Bacaha qaboojiyaha ama hilibka ku faafa
Cunto badeed la qiijiyay
Caano cayriin ama aan dhadhan lahayn
Macluumaad dheeraad ah waxaa laga heli karaa:
Toxoplasma waa dulin waxyeello leh oo sababi kara cudur loo yaqaan toxoplasmosis. Waxaa laga helaa hilibka ceyriinka ah ee aan la karin, miraha iyo khudaarta aan la dhaqin, carrada, sanduuqyada qashinka bisadaha iyo meelaha banaanka laga heli karo saxarada bisadu. Raacitaanka talaabooyinka fudud ee maaraynta cuntada ayaa yareyn kara halistaada waxaana laga heli karaa www.cfsan.fda.gov/pregnancy.html. Siyaabaha kale ee looga hortagi karo halista waxaa ka mid ah:
Qof kale ha u beddelo sanduuqa qashinka
Xidho gacno gashi marka aad wax beertid
Dhaq dhammaan miraha iyo khudradda ka dibna gacmahaaga si fiican u dhaq
Iska ilaali inaad hesho bisado cusub inta aad uurka leedahay
Hilibka ku kari heerkulka saxda ah
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato Meerkuriga ku jirta Kalluunka iyo Shellfish
Mercury waa cunsur si dabiici ah u dhacda una soo bandhigta dareere culus heerkulka qolka. Qaabkeeda aasaasiga ah, meerkurida looma tixgelin inay tahay mid bayoloji ahaan lagu heli karo: in kastoo markii lagu daadiyo guriga ama goobta shaqada uumiga uumiga ay keenaan halista muddada dheer ee neefsashada. Methyl meerkuriga waxaa laga helaa deegaanka waxaana lagu heli karaa bayoloji ahaan: yacni, si fudud jirka bini'aadamka ayaa u nuugo. Meerkuri waxay ku soo baxdaa dhulka, hawada, iyo biyaha marka alaabada meerkuri ka kooban la soo saaro ama lagu qubo iyada oo loo marayo qashin, qashin qubka, ama qaabab kale oo khaldan oo qashin ah. Markaad ku soo noqoto deegaanka, meerkurigu wuxuu la falgalaa waxyaabo dabiici ah si uu u noqdo methyl meerkuri. Mercury waxay gashaa silsiladda cuntada marka xayawaanku cunaan, oo ay ku jiraan kalluunka.
Kalluunka ka sarreeya silsiladda cuntada, sida shark, swordfish, King Mackerel, iyo Tilefish ayaa loo aqoonsaday inay ku jiraan heerar sare oo methyl meerkuri ah. Marka la cuno, methyl meerkurida waxay ku ururaysaa jirka aadanaha. In kasta oo aaney khatar weyn u lahayn dadka waaweyn badankood, meerkurigu waa sun neerfaha awood u leh neerfaha iyo kilyaha oo khatar ku ah uur-ku-taallada sii kordheysa ee nugul iyo cunugga yar. Haweenka ku jira da'da dhalmada, in kastoo aysan hadda uur lahayn, waxay ku uruursan karaan culeyska jirka ee xad dhaafka ah ee meerkurida, taasoo soo bandhigeysa suurtagalnimada waxyeello horumarineed inta lagu jiro uurka mustaqbalka ama inta ay nuujineyso
La talinta kalluunka ee EPA / FDA waxay soo jeedineysaa seddaxda soo jeedin ee soo socota ee haweenka iyo carruurta yar yar ee ka yar da'da lix sano:
Ha cunin Shark, Seef Kalluun, King Mackerel, ama Tilefish maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin meerkuri heerkiisu sarreeyo.
Cun illaa 12 wiqiyadood (2 celcelis ahaan cuntada) usbuucii noocyo kala duwan oo kalluun iyo kalluun qolof ah oo ka hooseeya meerkurida. Shan ka mid ah kalluunka inta badan la cuno ee ku yar meerkurigu waa haley, tuna fudud oo qasacadaysan, salmon, Pollock, iyo catfish. Kalluun kale oo sida caadiga ah la cuno, albacore ("cad") tuna ayaa ka badan meerkuri ka badan tanada fudud ee qasacadaysan Marka, markaad dooraneyso labadaada cunno ee kalluunka iyo kalluunka qolofta leh, waxaad cuni kartaa illaa 6 wiqiyadood (hal celcelis ah cunto) oo ah albacore tuna toddobaadkii.
Hubi la-talinta maxalliga ah ee ku saabsan badbaadada kalluunka ay ku soo qabteen qoys iyo saaxiibbo harooyinkaaga, wabiyada, iyo aagga xeebta ah. Haddii aan talo la helin, cun ilaa 6 wiqiyadood (hal celcelis cunto ah) toddobaadkii kalluunkii aad ka soo qabato biyaha maxalliga ah, laakiin ha cunin kalluun kale inta lagu jiro usbuuca. (http://www.fda.gov).
Afartan gobol ayaa xilligan soo saara talo bixinno kalluun oo ku saabsan harooyinka iyo durdurrada maxalliga ah. La talinta kalluunka ee Ohio ee 2004 waxaa soo saaray Ohio EPA (http://web.epa.state.oh.us) waxaana sidoo kale laga heli karaa qaybta "Digniinta iyo La-talinta" ee websaydhada Waaxda Caafimaadka Ohio ee www. .xukunka.oh.us. Labaatan iyo afar wabi oo ku yaal afartan iyo kow degmooyin Ohio ah ayaa ku jira la-taliyayaasha xaddidan ee la soo saaray 2004. Intaa waxaa dheer, talooyinka Ohio waxay ka talinayaan wax aan ka badnayn hal cunno usbuucii kalluun isboorti kasta oo laga soo qabto meel kasta oo biyo ah oo ku taal Ohio.
Nafaqo iyo FaQs
Sidee muhiim u tahay cuntadu xilliga uurka?
Cuntada xilliga uurka waa lama huraan hooyada iyo uurjiifka soo koraya labadaba. Haweenka uurka leh waxay u baahan yihiin inay cunaan cuntooyin kala duwan oo caafimaad qaba si ay u helaan nafaqooyinka ay u baahan yihiin. Kooxda Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa ku faraxsan inay soo jeediyaan talooyin ku saabsan cuntooyinka ugu fiican ee la cuno kiiskaaga iyadoo lagu saleynayo caafimaadkaaga.
Sideen ku heli karaa fiitamiino iyo macdan dheeraad ah xilliga uurka?
Cunista cunto dheellitiran ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu hubinayo inaad hesho dhammaan nafaqooyinka aad u baahan tahay. Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah, xubnaha kooxdayadu waxay kuu soo jeedin karaan fiitamiinnada dhalmada ka hor ama kaabeyaasha kale. Waa muhiim inaad la hadasho xirfadle caafimaad ka hor inta aanad bilaabin daawooyin cusub oo aan dhakhtar qorin, si kastaba ha ahaatee. Tani waa si loo xaqiijiyo caafimaadkaaga iyo badbaadadaada.
Miisaan culus ama buurni ma saameyn kartaa uurkayga?
Haa, miisaankaaga xad dhaafka ah ama buurnida ayaa kordhin kara halista aad ugu qaadi karto sonkorowga, dhiig karka, iyo dhibaatooyin kale. Haddii aad cayilan tahay ama cayilan, kooxdayada Columbus, OH, ayaa kula shaqayn karta si ay u horumariyaan qorshe cunto iyo jimicsi caafimaad leh. Waxaan sidoo kale ku ogeysiin karnaa cuntooyinka ay tahay inaad iska ilaaliso. Tani waxay kaa caawinaysaa hagaajinta caafimaadkaaga iyo caafimaadka uurjiifkaaga.
Jimicsiga xilliga uurka ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso murqaha muruqyada iyo adkeysiga, kuwaas oo kaa caawin kara qolka dhalmada.
Birta ayaa muhiim u ah cuntadaada maxaa yeelay waxay leedahay door udub dhexaad u ah sameynta haemoglobin, oo jirka siisa oksijiin.